လျှို့ဝှက် မင်္ဂလာပွဲကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ Millie Mackintosh - Yangon Media Group
ဟောလိဝုဒ်၊ သြဂုတ် ၁ဝ
အဆိုတော် Millie Mackintosh သည် သူမ၏ ဒုတိယ မြောက်မင်္ဂလာပွဲကို လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က လျှို့ဝှက်စွာ ကျင်းပခဲ့သော်လည်း ယခုအပတ်တွင် Hello မဂ္ဂဇင်းမှ တစ်ဆင့် ပရိသတ်များအား ဖွင့်ချအသိပေးခဲ့သည်။
Millie သည် ၎င်း၏ချစ်သူ ချဲလ်ဆီးစတား Hugo Taylor နှင့်အတူ မိမိတို့နှစ်ဦး၏ မွေးရပ်မြေရှိ ချဲလ်ဆီးမြို့တော်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မင်္ဂလာပွဲဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ ပွဲကျင်းပခဲ့ပုံ အသေး စိတ်အချက်အလက်များအား Hello မဂ္ဂဇင်းအား ဖြေကြားပေး ခဲ့ပြီး Hello က ၎င်းတို့၏သတင်းကို မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပွဲကို လျှို့ဝှက်ရိုးရှင်းစွာ ကျင်းပခဲ့ပြီး မင်္ဂလာကိတ်များနှင့် အခြားသော ပကာသနအပြင်အဆင်များ မတွေ့ခဲ့ရဟုဆိုသည်။ ယင်းပွဲသို့ မိသားစုဝင်များ၊ ဆွေမျိုးများနှင့် မိတ်ဆွေအချို့သာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မင်္ဂလာပွဲမတိုင်မီ မင်္ဂလာလက်မှတ် ရေးထိုးမှုကိုလည်း တိတ်တဆိတ်သာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါပွဲကို Hugo နှင့် Millie တို့နှစ်ဦး သေချာစွာစီစဉ်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများအား အဖိုးတန် အသားကင်များ၊ အဖိုးတန် ဗော့ဒ်ကာအရက်များ အစရှိသည်တို့ဖြင့် ကျနသေချာ ဧည့်ခံခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Millie တို့နှစ်ဦးက ”ဒါ… တို့တွေ အကြိမ်ကြိမ် မက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်ပါ။ ခုလောက် တစ်ခါမှမပျော်ဖူးခဲ့ဘူး” ဟု Hello သို့ ပြောပြခဲ့သည်။
ကေပေါ့ပ် ဂီတအဖွဲ့ BTS ဘီလ်ဘုတ် စာရင်းတွင် ဆက်တိုက်နေရာယူနေ
လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုကြောင့် ဆန်စက်များ ပုံမှန် မလည်ပတ်နိုင်မှုသည် လက်ရှိဆန်စပါးဈေးကွက??
လက်ရှိ မန်ယူတွင် မက်ဆီပင် ရုန်းကန်ရနိုင်သည်ဟု စခိုးလ် သုံးသပ်၊ ဆန်းချက်ဇ်၊ လူကာကူ၊ ပေါ့ဘာန?
ပင်စင်လစာ တိုးမြှင့်ပေးရန် စပိန်တစ်ဝန်းတွင် အငြိမ်းစားများ ဆန္ဒပြ